Ameerikaan loltoota kuma 5,200 gara daangaa Meeksikootti erguuf qophaayaa jirti - NuuralHudaa
Home/Odeeyfannoo/Ameerikaan loltoota kuma 5,200 gara daangaa Meeksikootti erguuf qophaayaa jirti
Ameerikaan loltoota kuma 5,200 gara daangaa Meeksikootti erguuf qophaayaa jirti
Yunaayitid Isteets baqattoota lammiilee Ameerikaa Jiddu galeessaa (Central America) irraa gara biyya isiitti godaanaa jiran ittisuuf, loltoota gara daangaa Meeksikootti erguudhaaf kan qophaayaa jirtu tahuu beeksifte. Gareewwan mirga namoomaa murtii kana, “bulchiinsi Traamp bu’aa siyaasaatiif jecha akka waan gaaga’amni hamaan uumamee fakkeessaa jira” jechuun qeeqan.
Torbee darbe Prezdaant Traamp godaantotaa gara Ameerikaa imalaa jiran ittisuudhaaf daangaa Meeksikoo fi USA loltootaan kan cufu tahuu dhaadate. Haaluma kanaan Waajirri Ittisa Ameerikaa Pentaagoon ibsa baaseen, loltoonni 5,200 meeshaalee waraanaa guutuu, Helikoptaraa fi xiyyaarota akkasumas Shiboo Sibiilaa daangaan ittiin cufamu waliin, hanga dhuma torbaan kanaatti ni bobbaafaman jedhe.
Traamp kaleessa fuula Twitter isaa irratti, “gareewwan yakka gurmaa’ee raawwachuun beekaman, Godaantota kanniinitti makamanii biyya keenya weeraruuf gara daangaa keenyaatti imalaa jiran. Kanaafuu loltoonni keenna yakkamtoonni akka gara keenya hin seenne ittisuu qaban” jedhe. Godaantota torbaan lama dura Honduraas irraa ka’an jidduu yeroo ammaa gareen dursu daangaa Ameerikaatti kan dhihaate yoo tahu, irra hedduun ammoo daangaa Ameerikaa irraa Kilomeetra 1,600 fagaatanii akka jiran gabaasni arganne ni ibsa.
Ameerikaa Baqattoota Ameerikaa Jiddu Galaa
June 1, 2020 sa;aa 1:55 am Update tahe